Gunyana 5, 2018 arun
Twitter CEO anoudza Congress zviri Exploring blockchain kurwa scams
Twitter CEO Jack Dorsey akaudza Congressional komiti neChitatu kuti evanhu vezvenhau kambani iri kudzidza blockchain negadziriso kwayo papuratifomu. Dorsey akanga achipindura mubvunzo kubva California Rinomiririra panguva Energy uye Commerce kunzwa pfungwa mushandisi zvakavanzika kuchengetedzwa, tisare, kugutsikana nomwero uye zvinonzi kutsvetera pamusoro enyika kuzvikudza pamusoro Twitter.
Matsui akabvunza: “Ndezvipi zvinogona mafomu munoona kuti blockchain?” Dorsey akapindura “tinofanira kutanga nezvinetso tiri kuedza kugadzirisa kuti vatengi vedu uye kutarisa zvose iripo Michina… Blockchain ndomumwe kuti ndinofunga ane zvizhinji untapped zvinogona, kumativi zvakananga akagovera chivimbo uye vakagovera rawo. Hatina aenda kudzika sezvakanga ndinoda bedzi asi kunzwisisa sei kuti tingashandisa zvigadzirwa izvi Twitter asi tine vanhu kufunga nezvazvo nhasi.”
EU vanofanira kuvawo nevakawanda cryptocurrency mitemo, maererano kushuma vashumiri
A Belgium anotsanangura vanofunga tangi iri nharo kuti EU inofanira kuumba chete mutemo cryptocurrency nemitemo mushumo akatumwa mari vashumiri mukati zvoupfumi misa. Bruegel, vachishandisa kweBrussels, muBelgian Capitol, anotenda kuti EU zvinodiwa “zvakafanana mitemo” pamusoro cryptocurrencies, uyewo sei zviratidzo anoparadzirwa uye mhindu. It kuti richisvika pachine ane “kurongwa musangano zveupfumi uye zvemari zvakanangana vashumiri” Papera vhiki rino. Mushumo harisati pachena kuwanika.
Mushumo anoti EU vanofanira vanovapa mitemo nevakawanda pamusoro crypto exchanges uye kutanga yesimbi zvipiriso (ICOs) naizvo. Kuti zviri kutaurwa, mashoko anoti kuti Bitcoin kwakaita decentralized hunhu anoita yokudzora kuti cryptocurrency pachayo “hazviiti.” Zvazvakadaro, izvozvo akasimbisa kuti chero mitemo aizofanira unoshanda exchanges kana zvimwe makambani kufanana. Paro Zvinyorwa China crackdown pamusoro cryptominers, kucherechedza kuti kuchera mapurazi inogona kurambidzwa uyewo.
Goldman Sachs anosiya Bitcoin dzokutengeserana urongwa nguva yokuva
Goldman Sachs ari ditching urongwa kuvhura dhesiki kuitira dzokutengeserana cryptocurrencies sezvo pamutemo yemibvunzo crypto anoramba kujeka, maererano vanhu vanoziva nyaya yacho. In achangopfuura mavhiki, Goldman Executives vakagumisa kuti matanho akawanda achiri kuda kutorwa, vazhinji vavo kunze pamahombekombe kudzorwa, pamberi yaidzorwa pamahombekombe aibvumirwa kuchinjanisa cryptocurrencies.
Goldman Sachs Mutauriri Michael DuVally akati "Panguva iyi, hatina mhedziso pamusoro kutsanangurwa yedu digitaalinen twa chinopiwa.”
Crypto kuchera akagamuchira ive indasitiri kubudikidza wevechitendero masimba
hurumende Iran kwakaita kugamuchirwa crypto kuchera somunhu indasitiri, munyori Iran zvaJehovha paIndaneti Council kuti Abolhassan Firoozabadi akati remigodhi cryptocurrencies akadai Bitcoin anzverwa ive indasitiri kubudikidza makuru zvehurumende. zvisinei, mitemo yebasa wezvamatongerwe pamutemo yemibvunzo yacho indasitiri harisati kusumwa munyika.
Firoozabadi akataura kuti Iranian National paIndaneti Center iri kugadzira chikuva kuti cryptocurrency kuchera chengetedzo. The munyori inonzi aiti kuti kuMudzidzisi zviremera achasuma munhu pamutemo yemibvunzo crypto-chokuita startups uye yemakambani mukupera September.
Kraken Daily Market Mushumo 04.09.2018
$96.6M nhumbi mhiri misika zvose nhasi